လျှို့ဝှက်ချက်ကဘာလဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဆင့်နှစ်ဆင့် - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
ငါကိုငါမြင်၏ မကြာသေးမီ post ကို by / u / Time_for_da_parteh ဤနေရာတွင်စစ်ပြန်များကိုသူတို့၏အောင်မြင်မှု၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမျှဝေခြင်းမပြုသည်ဟုစွပ်စွဲပြောဆိုပြီး၎င်းအားလုပ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ငါ (သေး!) နေ့ ၉၀ ကျော်ကောင်လေးမဟုတ်သေးသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ "လျှို့ဝှက်ချက်များ" ကိုပို့စ်တွင်မျှဝေမည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်၊ သို့မှသာလူအများမြင်နိုင်ရန်အခွင့်အလမ်းများပိုရလိမ့်မည်။ ဒီတော့ဒီမှာသွား:
ပထမဦးဆုံးနှင့်အခက်ခဲဆုံး, ခြေလှမ်းကိုသင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလူအများစုလက်လွတ်အရာဖြစ်တယ်။ သင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနက်ရှိုင်းစွာယုံကြည်နေကြသည်မဟုတ်လျှင်, သင့်ရဲ့ကြိုးစားမှုဖြစ်ကောင်းဝက်နှလုံးပါလိမ့်မည် (မှာအကောင်းဆုံး) နှင့်သူတို့လိမ့်မည် ဖြစ်နိုင် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ဒါအကြီးအကျယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရိုးစွဲအမူအကျင့်ကနေမတူညီတဲ့အရာသစ်တစ်ခုအရာအပေါ်ကိုစတင်ကြသည်ကတည်းကပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်, အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာသငျသညျကဲ့သို့တူညီသောရုန်းကန်မှုများရာ၌ခန့်ထားပြီ, ငါတို့များစွာသောသူတို့ကိုကျော်လွှားပါပြီ။ သငျသညျကွိုးစားလျှင်သင်လည်းမည်။
Do မဟုတ် အလိုတော်ပါဝါနှင့်အတူဤတိုက်ဖျက်ရန်ကြိုးစားပါ။ အဲဒီအစားအဖြစ်အများအပြားရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစား ကျားကန် သင်အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ကထိုရမ္မက်ဝေးအာရုံကိုကူညီမယ့်နောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်သာရံဖန်ရံခါပါဝါပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ K9 filter ကို program ကို install လုပ်ပါ။
Install res နှင့်၎င်း၏ nsfw filtering ကိုဖွင့်။
တစ်ဦးကွင်းဆက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအပေါ် Start http://dontbreakthechain.com .
တတ်နိုင်သမျှအများပြည်သူမြင်ကွင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထားပါ။ သင့်ရဲ့အခန်းတံခါးကိုပိတ်မထားပါနဲ့။ သင်သည်သင်၏ရေချိုးခန်းထဲမှာနေဖို့အချိန်ကိုကန့်သတ်မယ့် timer နေရာမှာသုံးပါ။
ဤနေရာတွင် လာ. သင်တတ်ပြီးခံစားရသည့်အခါအကူအညီကိုရှာ။ ဒီမှာပုံပြင်များကိုဖတ်ပါ။
သင်တုန်လှုပ်ချောက်ချားနေသောအခြေအနေတွင်ရှိနေသည်ဟုခံစားရခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အခါတွင်မဆိုသင်ကိုယ်တိုင်အာရုံပျံ့လွင့်စေရန်တစ်ခုခုလုပ်ပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုခေါ်။ စကားပြောပါ၊ သို့မဟုတ်အချို့သောအလုပ်များလုပ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ဤ Subreddit ကို log in လုပ်ပါ။ လူတို့၏ရုန်းကန်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများအကြောင်းဘာပြောရမည်ကိုကြည့်ပါ။ ချက်ချင်းတိုက်တွန်းမှုမှသင့်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေမည့်အရာ။ သင်တွန်းအားသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်ဟုခံစားရပါက subreddit ၏ irc channel (ညာဘက်ရှိ link) သို့သွားပြီးထိုတွင်ရှိသည့်ရှေးရိုးလူနှင့်စကားပြောပါ။
အဆိုပါရက်အတွင်းတဖြည်းဖြည်းပထမဦးဆုံးမှာတက် add, ပြီးတော့သူတို့: ငါကနောက်ဆုံးများအတွက်အကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် ယင်ကောင် သည်။